isantya esiphezulu Induction Soldering Brass Corner Joint
Ukudibana okuphezulu kwesiqhelo ukuThengiswa kweBhule yeCority
Umthengisi ophumelele ngokudibeneyo weekhonkrithi ezimbini zekona yobhedu ezingama-45.
I-DW-UHF-10kw i-heering heater ye-heater
HlalaBrite # 8 isilivere ethengiswa ngumthengi
Bridgit solder flux ebonelelwe ngumthengi
Ikhonkco elidibeneyo lebrass
Ubushushu: Malunga ne-550 ° F (288 ° C)
Ixesha: i-20 sec
Iflux isetyenziswa kuwo onke amalungu.
Indibano imiselwe ukufudumeza
Ukufudumeza ungeniso kusetyenziswa i-15 sec
Intonga evuthayo isetyenziselwa ukudibanisa
Kuba i-alloy brazing yondliwe ngesandla, i-coil ibekwe phantsi komdibaniso, ijonge kwicala elibonakalayo lesakhelo. Icala elibonakalayo lokudibana libekwe phezu komthi othe tyaba, ongavumeli ukuba i-alloy brazing ivuye kwaye ichithe. Oku kugcina umphezulu obonakalayo umhle kwaye ucocekile, ngelixa umthungo ungaphakathi ubrawu.
Ukuba kusetyenziswe i-paster yomthengi, ke ikhoyili ingabekwa ngaphezulu kokudityaniswa. Ukuba kusetyenziswe i-coil ekhethekileyo emibini, emva koko zombini ukudibanisa (phezulu kunye nezantsi) kunokwenziwa ngokudubula okukodwa.
Akukho ukutsiba kwisakhelo kuyafuneka kule meko. Bona ividiyo kwaye usondeze imifanekiso eqhotyoshelwe kwezinye iinkcukacha.
Akukho kucoca okukhethekileyo okufunekayo kwicala lokudibanisa. Isampula emifanekisweni yayisongelwe iphepha.
iindidi Teknoloji tags ukuxutywa kwevama, umthengisi ongenisayo, ukutyunjwa kokungena, i-induction ethengisa ikona, ukutyhulwa kwindleko, umshini wokucoca, i-soldering, ubhedu, ikona yokuthengisa yobhedu, ukudibanisa okuhlanganisiweyo ngobhedu, zethusi, umatshini wokuthengisa ongenisayo Post yokukhangela